MB 2017 Aogositra - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2017 Aog
Ny fahagagana dia fisehoan-javatra mihoatra ny natiora izay mihoatra ny fahaiza-manaon'ny natiora, na dia manoro hevitra aza i CS Lewis ao amin'ny bokiny Miracles fa “ny fahagagana dia tsy ... mandika ny lalàn'ny natiora. “Rehefa manao fahagagana Andriamanitra dia miditra an-tsehatra amin’ny fizotry ny natiora amin’ny fomba izay Izy irery ihany no mahavita azy. Indrisy anefa, indraindray ny Kristianina dia manaiky ny hevi-diso momba ny fahagagana. Misy milaza, ohatra, fa raha betsaka ny olona nanam-pinoana, dia mbola hisy fahagagana. Ny mifanohitra amin’izany anefa no asehon’ny tantara — na dia niaina fahagagana maro nataon’Andriamanitra aza ny Isiraelita, dia tsy nanana finoana izy ireo. Ohatra iray hafa, misy milaza fa ny fanasitranana rehetra dia fahagagana. Na izany aza, ny fanasitranana maro dia tsy mifanaraka amin'ny famaritana ara-pomba ny fahagagana - maro ny fahagagana dia vokatry ny dingana voajanahary. Rehefa manapaka ny rantsan-tànantsika isika ary mahita ny fomba sitrana tsikelikely, dia dingana voajanahary nomen’Andriamanitra ny vatan’olombelona izany. Ny fomba fanasitranana voajanahary dia famantarana (fanehoana) ny hatsaram-pon’Andriamanitra, Mpamorona antsika. Rehefa sitrana avy hatrany anefa ny ratra lalina, dia takatsika fa nanao fahagagana Andriamanitra - niditra an-tsehatra mivantana sy tamin’ny fomba mahagaga Izy. Amin'ny tranga voalohany dia manana famantarana ankolaka isika ary amin'ny faharoa famantarana mivantana - samy manondro ny fahatsaran'Andriamanitra.
Mampalahelo fa misy ny sasany mampiasa ny anaran'i Kristy ary misy aza ny fahagagana sandoka mba hananganana manaraka. Indraindray izany dia azo jerena ao amin'ilay antsoina hoe "serivisy fanasitranana". Ny fomba fanararaotana mahatsiravina toy izany dia tsy hita ao amin'ny Testamenta Vaovao. Fa kosa, mitatitra ny serivisy fanompoana momba ireo olana lehibe amin'ny finoana, fanantenana ary fitiavana an'Andriamanitra izay antenain'ny mpino ny famonjena, izay nianaran'izy ireo tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Tsy tokony hampihena ny fankasitrahantsika ny tena fahagagana anefa ny fanararaotana ny fahagagana. Mamelà ahy hiteny aminao ny amin'ny fahagagana iray izay ahafahako manaporofo ny tenako. Nanatevin-daharana ny vavaky ny maro hafa izay nivavaka ho an'ny vehivavy iray izay ny homamiadan'ny tsy fahampian-kanina no efa nohanin'ny taolan-tehezany vitsivitsy. Teo amin'ny fitsaboana ara-pitsaboana izy ary rehefa nihosotra dia nangataka fahagagana nahasitrana an'Andriamanitra. Ny vokatr'izany dia tsy narary intsony ny homamiadana ary nitombo ny taolan'izy ireo! Nilaza taminy ny dokotera fa fahagagana ary tokony hanohy izay rehetra nataony ». Nohazavainy taminy fa tsy noho ny zavatra nataony, fa ny fitahian'Andriamanitra. Ny sasany dia mety milaza fa ny fitsaboana ara-pitsaboana nahatonga ny homamiadana dia lasa ary nitombo indray ny taolan-tehezana, izay azo atao tokoa. Izay ihany no ho ela, saingy naverina haingana be ny taolan-tehezany. Koa satria "tsy afaka nanazava ny fanarenana haingana ny dokotera" dia nanatsoaka hevitra isika fa niditra an-tsehatra Andriamanitra ary nanao fahagagana.
Ny finoana ny fahagagana dia tsy voatery ho fanoherana ny siansa voajanahary, ary ny fitadiavana fanazavana voajanahary dia tsy midika hoe tsy fisian'ny finoana an'Andriamanitra. Rehefa misy hypothesize ny mpahay siansa, dia mamantatra raha mety ho fantatra ny lesoka. Raha tsy misy hadisoana azo tsikaritra mandritra ny fanadinadinana, dia milaza izany amin'ny hypotesa. Izany no antony tsy hanaovantsika avy hatrany ny fitadiavana fanazavana voajanahary toe-javatra mahagaga toy ny fandavana ny finoana ny fahagagana.
Nivavaka daholo izahay rehetra mba hanasitranana ny marary. Ny sasany dia sitrana tamin'ny fomba mahagaga. Raha misy ny fanasitranana mahagaga, dia tsy miankina amin'ny hoe iza na firy no nivavaka. Tsy nositranina tamin’ny «tsilo tamin’ny nofo» ny apostoly Paoly, na dia nivavaka intelo aza izy. Ny zava-dehibe amiko dia izao: rehefa mivavaka fahagagana fanasitranana isika dia mamela ny finoantsika amin'ny fanapahan-kevitr'Andriamanitra na inona ary oviana ary ahoana no hahasitrana azy. Matoky azy hanao izay tsara indrindra ho antsika isika satria fantatsika fa amin'ny fahendreny sy ny hatsaram-panahiny dia raisiny ireo zavatra izay tsy ho fantatsika.
Amin’ny alalan’ny vavaka ho an’ny fahasitranana ho an’ny marary iray dia mampiseho ny iray amin’ireo fomba ahafahantsika maneho fitiavana sy fangorahana ireo sahirana sy mifandray amin’i Jesosy amin’ny fanelanelanana mahatoky Azy amin’ny maha-mpanelanelana antsika sy mpisoronabe antsika. Misy ny fampianarana ao amin’ny Jakoba 5,14 Diso hevitra ny antony mahatonga azy ireo hisalasala hivavaka ho an’ny marary iray, amin’ny fiheverana fa ny loholona ao amin’ny paroasy ihany no mahazo alalana hanao izany, na hoe ny vavaky ny loholona iray dia mandaitra kokoa noho ny vavaky ny namana na olon-tiana. Toa nikasa i Jakoba fa ny toromarika nomeny an’ireo mpikambana ao amin’ny paroasy mba hiantso ireo loholona hanosotra ny marary dia tokony hampiseho mazava tsara fa tokony ho mpanompo ho an’ireo sahirana ireo loholona. Hitan’ny manam-pahaizana momba ny Baiboly ao amin’ny toromarika nomen’ny apostoly Jakoba fa nisy firesahana momba an’i Jesosy naniraka ny mpianatra ho antokony roa (Marka. 6,7), dia “nandroaka fanahy ratsy maro izy ireo ary nanosotra diloilo ny marary maro ka nahasitrana azy” (Marka). 6,13). 
Rehefa mivavaka ho an'ny fanasitranana isika dia tsy tokony hieritreritra fa anjarantsika ny manery an'Andriamanitra hihetsika amin'ny fahasoavany. Ny hatsaram-pon'Andriamanitra dia fahasoavana malala-tanana foana! Koa maninona no mivavaka? Amin'ny alàlan'ny vavaka dia mizara amin'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olon-kafa ary koa eo amin'ny fiainantsika isika, satria manomana antsika ny zavatra hataony araka ny fangorahany sy ny fahendreny Andriamanitra.
Avelao aho hanome saina anao: raha misy olona mangataka fanampiana aminao amin'ny resaka fahasalamana, ary maniry ny hitoetra ho tsiambaratelo izany, dia tokony harahina izany fangatahana izany. Ny iray tsy tokony alaim-panahy hino fa ny "vintana" manasitrana dia mifanitsy amin'ny isan'ny olona mivavaka ho azy. Ny fiheverana toy izany dia tsy avy amin'ny Baiboly, fa avy amin'ny fomba fisainana mahagaga.
Amin'ny fandinihana rehetra momba ny fanasitranana dia tokony hotadidintsika fa Andriamanitra no manasitrana. Indraindray izy dia manasitrana amin'ny alalan'ny fahagagana ary indraindray manasitrana voajanahary izay efa ao anatin'ny zavaboariny. Na ahoana na ahoana, ny crédit rehetra dia tokony ho azy. Ao amin’ny Filipiana 2,27 Nisaotra an’Andriamanitra ny apostoly Paoly noho ny famindram-pony tamin’i Epafrodito sakaizany sady mpiara-miasa taminy, izay narary efa ho faty talohan’ny nanasitranan’Andriamanitra azy. Tsy milaza na inona na inona momba ny fanompoana fanasitranana na olona manokana manana fahefana manokana i Paoly (anisan’izany ny tenany). Nidera an’Andriamanitra fotsiny kosa i Paoly noho ny nanasitranany ny namany. Ohatra tsara tokony harahina izany.
Noho ny fahagagana izay navela hitory ary hafa izay reko tamin'ny hafa dia resy lahatra aho fa mbola sitrana Andriamanitra ankehitriny. Rehefa marary isika, dia manana ny fahafahana ao amin'i Kristy hangataka olona hivavaka ho antsika, hiantso ny loholon'ny fiangonantsika, hosory menaka, ary hivavaka ho an'ny fanasitranana antsika. Avy eo ny adidintsika sy ny tombontsoantsika hivavaka ho an'ny hafa dia mangataka amin'Andriamanitra fa raha sitrapony izany, dia hositraniny ireo marary sy mijaly. Na ahoana na ahoana, dia matoky ny valin-tenin'Andriamanitra sy ny fotoanany isika.
Ho fankasitrahana ny fanasitran'Andriamanitra,